LiveU သည် Sinclair အသံလွှင့်အဖွဲ့နှင့်ဒေါ်လာနှစ်သန်းတန်သဘောတူညီမှုကိုကြေငြာခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 20 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » LiveU Sinclair အသံလွှင့် Group နဲ့ $ 20M Multi-တစ်နှစ်တာသဘောတူညီမှုရကြေညာ
Sinclair အသံလွှင့်အဖွဲ့ (Nasdaq: SBGI) မကြာသေးမီကမီဒီယာကုမ္ပဏီအမြဲနောက်ဆုံးပေါ်ကပ်လျက်တည်ရှိအိုင်ပီနည်းပညာရှိပါတယ်သေချာ၎င်း၏ newsgathering စစ်ဆင်ရေးများအတွက် LU600 HEVC မှခရီးဆောင်ဂီယာယူနစ်ရာပေါင်းများစွာ၎င်း၏ရေတပ်ကိုလည်းအဆင့်မြှင့်တင်ကြောင်း LiveU နှင့်အတူ multi-တစ်နှစ်ငှားရမ်းသဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ အဆိုပါသဘောတူညီချက်ချက်ချင်းပိုမိုမြင့်မားထိရောက်စွာ featuring HEVC လယ်ကွင်းယူနစ် LiveU ရဲ့အထင်ကရမော်ဒယ် သာ. ကြီးမြတ်တည်ငြိမ်မှုဖို့အမေရိကန် 80 ထုတ်လုပ်မှုနေရာများတွင် spanning Sinclair ဘူတာကိုလည်းအဆင့်မြှင့်တင်, အနိမ့် bandwidth ကိုအခြေအနေများတွင်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်အကောင်းဆုံးဗီဒီယိုအရည်အသွေးကိုတိုးတက်လာခဲ့သည်။
Sinclair 2011 ကတည်းက LiveU ဖောက်သည်ခဲ့ပြီး LiveU နှင့်အတူစိုက်ပျိုးခဲ့သည်။ မီဒီယာအုပ်စုတစ်စု newsgathering အတွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုအစွန်းကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်အမျှမျိုးဆက်တိုးတက်မှုအတွက် LiveU ဖြေရှင်းချက်တစ်စုံအတွက်ဖြစ်ပေါ်ကြီးထွားဖို့ကပ်လျက်တည်ရှိ IP ကိုဖြေရှင်းချက်၎င်း၏ရေတပ်ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
"အစအဦး မှစ. Sinclair LiveU နည်းပညာကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းစုရုံးနဲ့ content စစ်ဆင်ရေးမှထောက်ပံ့ပေးကြောင်းတန်ဖိုးကိုအသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့်ခြားနားချက်စေသောထုတ်ကုန်ကိုထောကျပံ့တဲ့သူ LiveU မှာလူများ၏ကတိကဝတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကုမ္ပဏီရဲ့ COO & Co. , တည်ထောင်သူ, Avi Cohen ကိုနှင့် LiveU နှငျ့ကြှနျုပျတို့၏ဆကျဆံရေးကိုတန်ဖိုးထား။ ဒီသဘောတူညီ LiveU ကြှနျုပျတို့၏အကွောငျးအရာစစ်ဆင်ရေးမှဆောင်တတ်၏တန်ဖိုးကိုတစ်အသိအမှတ်ပြုမှုဖြစ်ပါတယ် "ဟုဒဲလ်ပန်းခြံ, Sinclair များအတွက် SVP ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်နည်းပညာအရာရှိချုပ်ကပြောကြားသည်။
"Sinclair အသံလွှင့်အုပ်စုသည်၎င်း၏ခြေရာကိုတိုးချဲ့ထားပါတယ်အမျှ LiveU ယင်း၏စခန်းများမဆိုနည်းနည်းမှုနှုန်းမှာအမြင့်ဆုံးပုံရိပ်အရည်အသွေးကယ်နှုတ်တော်မူခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ဒေသဆိုင်ရာစျေးကွက်အတွင်းယှဉ်ပြိုင်ရန်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်းနည်းပညာများသေချာစေရန်လည်းမရှိ," Avi Cohen ကို, LiveU COO & Co- ကပြောပါတယ် တည်ထောင်သူ။ "ကျနော်တို့ကစျေးကွက်အပေါ်မရရှိနိုင်ပါဆယ်လူလာဖြေရှင်းချက်ကပ်လျက်တည်ရှိကိုအကောင်းဆုံးဖျော်ဖြေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ newsgathering နှငျ့ကြှနျုပျတို့၏ဖောက်သည်ပေးခြင်းအားဖြင့် IP ကိုတော်လှန်ရေးကားမောင်းဆက်လက်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းပညာနှင့်အတူ Sinclair ရဲ့ဆက်လက်အောင်မြင်မှုမျှော်လင့်နေပါတယ်။ "
Sinclair LiveU Matrix, LU-စမတ်နှင့် LiveU မော်တော်ယာဉ်ဖြေရှင်းချက်အပါအဝင် LiveU ၏အခွား IP ကို-based ဖြေရှင်းချက်များအသုံးပြုခြင်းနှင့်အတူနည်းပညာစာအိတ်တွန်းအားပေးနေဆဲဖြစ်သည်။
real-time အကြောင်းအရာဖြည့်ပံ့ပိုး & ဖြန့်ဖြူး
Sinclair အားလုံး၎င်း၏ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်သတင်းပလက်ဖောင်းကိုဖြတ်ပြီး, ထိုကဲ့သို့သောကယ်လီဖိုးနီးယား Wildfire အဖြစ်သတင်းဖြစ်ရပ်များ, များအတွက်တိုက်ရိုက်အကြောင်းအရာဝေမျှဖို့ LiveU Matrix အကောင်အထည်ဖော်နေပါတယ်။ LiveU Matrix, ကုမ္ပဏီ၏မျိုးဆက်သစ် IP ကိုမိုဃ်းတိမ်ကိုဗီဒီယိုကစီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်း, တန်ဖိုးနည်းအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကို အသုံးပြု. ဘူတာရုံအုပ်စုတစ်စုတစ်လျှောက်လုံးမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ထိထိရောက်ရောက်တိုက်ရိုက်အကြောင်းအရာ, ရှုမြင်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးဖို့ Sinclair ရဲ့ဘူတာနိုင်ပါတယ်။
ခြိုးဖောကျတဲ့သတင်းသည့်အချိန်တွင်မဆိုဘယ်နေရာမှာမဆိုဖြစ်ပျက်အဖြစ်, Sinclair စမတ်ဖုန်းများများအတွက် LU-စမတ် app ကိုနှင့်အတူ၎င်း၏လယ်ကိုသတင်းထောက်တွေကိုနှင့်လေယာဉ်အမှုထမ်းလက်နက် ပြု. သုံးစွဲနိုင်စွမ်းအကဲဖြတ်ဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်သူတို့ကလုံးဝနီးပါးဘယ်နေရာမှာမဆိုတိုက်ရိုက်သွားနှင့်တည်းဖြတ်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးဘို့ပြန်စတူဒီယိုမှအကြောင်းအရာကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
4K ဆယ်လူလာကပ်လျက်တည်ရှိ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဆယ်လူလာ Bond အထောက်အပံ့ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor HEVC isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော သတင်း newsgathering လှံ & Arrows အားကစား ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-01-14
ယခင်: ကိုလိုနီခေတ် Editor ကိုမှဂရေဟမ်ချပ်မန်းကိုအားပေးအားမြှောက်
နောက်တစ်ခု: ဘယ်လာရုစ် 24 HD ကို - Globecast Eutelsat HotBird ပေါ်ပထမဦးဆုံး CIS HD ကိုရုပ်သံလိုင်းလွှင့်တင်